Ireo sary voalaza fa tena misy ao amin'ny OnePlus 7T Pro dia hita | Androidsis
Vetivety dia mety ho vavolombelona ny hetsika fandefasana ny OnePlus 7T Pro. Hatramin'ny maha-duo an'ny orinasa azy ankehitriny, izay ireo OnePlus 7 y 7 Pro, no natao ofisialy, ny tsy manam-paharetana indrindra dia efa niresaka momba ilay maodely voalohany noresahintsika, izay nipoitra ny fiheverana marobe momba ny kalitaony, izay raha ny fahatongavany no avo indrindra sy tsara indrindra ... raha oharina amin'ireo zandriny lahy, farafaharatsiny.
Hanatsara ny fisainanao, sary roa avy amin'ny OnePlus 7T Pro no nipoitra. Ireo dia milaza amintsika betsaka momba ny famolavolana ny smartphone, miaraka amin'izay koa, tsy zava-baovao, ary zavatra azonao hamarinina ho anao eto ambany izany.
Ny fitaovana hita amin'ny sary apetraka etsy ambany dia mampiseho azy ao anaty boaty fiarovana. Amin'ny voalohany eo ankavanana dia mifandray amin'ny tariby mameno izany, fa ny faharoa kosa tsy. Ny estetika dia mitovy amin'ny OnePlus 7 Pro, izay mety hahakivy kely. Ny antenaina misy dia miresaka zavatra havaozina, saingy azo atao izany raha tsy ny fampahafantarana anatiny ihany no ifantohan'ny orinasa.
Ny OnePlus 7T Pro dia andrasana hamely ny tsena any aoriana, ao anatin'ny volana maromaro. Manokana, Novambra no daty nanambarana azy.
Mbola aloha loatra ny miresaka momba ny mety mampiavaka azy sy ny mombamomba azy, saingy afaka manomboka amin'ireo efa fantatsika momba ny OnePlus 7 Pro isika. Mazava fa ho tsara kokoa ity terminal ity.
Tadidio fa ny OnePlus 7 Pro dia misy efijery AMOLED 6.67-inch miaraka amin'ny vahaolana QuadHD + 3.120 x 1.440 teboka (516 dpi). Manome tahan'ny famelomana 90 Hz izy io. Angamba ny variant manaraka dia hitazona io kalitao io ihany. Ho setrin'izany, mahita mpanodinana isika Qualcomm Snapdragon 855, fahatsiarovana 6/8/12 GB RAM, habaka fitahirizana 128 na 256 GB ary fatran'ny bateria 4,000 mAh, ary koa fakan-tsary triple aoriana 48 MP + 8 MP + 16 MP ary sensor eo anoloana 16 MP.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Miseho ireo sary voalaza fa tena sarin'ny OnePlus 7T Pro
Ahoana no hizarana ny toerana misy anao amin'ny WhatsApp